माओवादीको महासचिवमा नयाँ पात्रको इन्ट्री, नाम सुनेपछि नेताहरु चकित ! - jagritikhabar.com
माओवादीको महासचिवमा नयाँ पात्रको इन्ट्री, नाम सुनेपछि नेताहरु चकित !
नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अधुरो केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी विहिन बनाएर सम्पन्न भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनले माओवादीलाई थप कमजोर बनाएको छ।
८ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महासचिवको विषय थप पेचिलो बनेपछि महाधिवेशन पदाधिकारी विहिन भएर सम्पन्न भएको हो। महासचिवमा धेरै नेताले आकांक्षा देखाएपछि प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यको नामावली प्रस्तुत गरेर महाधिवेशन समापन भएको घोषणा गरेका थिए।
महासचिवमा कृष्णबहादुर महरा, बर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, देव गुरुङ, गिरिराजमणी पोखरेल लगायतले दावि गरेपछि प्रचण्ड संकटमा परेका थिए। उपचारका लागि चीनमा रहेका नेता पुन महासचिवका सबैभन्दा बलिया दावेदार हुन्।
उनी महाधिवेशनमा सहभागी नभएपछि प्रचण्डलाई थप संकट भएको हो। आफूलाई महासचिव बनाउन प्रचण्डले खुट्टा कमाएपछि पुनले प्रचण्डलाई फोन गरेर नयाँ पात्रको इन्ट्री गराएका छन्।
हाल स्वास्थ्य उपचारका सिलसिलामा चीनमा रहेका पुनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई महासचिवमा आफ्नो दावी कायम रहको स्पष्ट पार्दै आफू नभए शक्ति बस्नेतलाई महासचिव बनाउँन प्रचण्डसँग सर्त राखेका छन्।
पुनको यस्तो सर्तले माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी चयन थप पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रचण्डले प्रतिउत्तरमा उसो भए हुन्छ भनेर जवाफ फर्काएका छन्। सुरु देखिनै माओवादी केन्द्रको महासचिवमा जनार्दन शर्मा र बर्षमान पुनले दाबी गर्दै आएका थिए।
माओवादी केन्द्रमा धेरै प्रचार प्रसार र हल्ला हुँदा अप्ठेरो पर्ने डरले उनहरुले आफ्नो गतिविधीलाई भित्रभित्रै संगठित गरे पनि अहिले खुलेर लागेका छन्। प्रचण्डले भने पुन र शर्मा दुवैलाई छोडेर देव गुरुङलाई महासचिव बनाउँने तयारी गरेको बताइएको छ।
यसले बिषय थप रोचक बनेको छ। बर्षमान पुनले केहि दिनमै डिस्चार्ज भएर नेपाल आउँने भन्दै प्रचण्डलाई निर्वाचन प्रक्रियानै स्थगित गर्न अनुरोध गरेका थिए। यदि प्रक्रिया नै अगाडि बढाउने हो भने।
आफूले महासचिवको दावी नछोड्ने तर सहमतिका लागि छाड्न परे शक्ति बस्नेतलाई दिनु पर्ने अडान राखेका छन्। माओवादी केन्द्र भित्र जनार्दन शर्मा र बर्षमान पुनका विचमा प्रचण्डको उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने बेजोड प्रतिष्पर्धा रहेको बताइन्छ।
पुन र शर्मा दुवै प्रचण्डको उत्तराधीकारी बनेर भावी पार्टी नेतृत्वमा स्थापित हुने दौडधुपमा छन्। पार्टी भित्र शर्मा र पुन एकअर्काको अस्तित्वनै स्विकार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइन्छ।
तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका नवर्निवाचित अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि आफूले निकै ठूलो जिम्मेवारी बोकेको महसुस गरेको बताएका छन्।
ललितपुरको सानेपा हाइटस्थित हेरिटेज गार्डेनमा आज आयोजित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकबाट अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको बताए।
मैले लामो समय पार्टीको नेतृत्वमा रहेर विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ, इतिहासका गम्भीर मोडमा गम्भीर भूमिका खेल्ने अवसर पाएको छु उनले भने।
यति धेरै उतारचढावबाट गुज्रेर फेरि पनि सक्रिय नेतृत्वको भूमिकामा रहिरहँदा कहिलेकाहीँ फरक भूमिकामा पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ, तर पार्टी र देशको अवस्थालाई हेर्दा अझै केही समय सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने बाध्यता रहेको मलाई महसुस भइरहेको छ।
माओवादी आन्दोलनले इतिहासमा निक्कै ठूलो त्याग र बलिदानको आधारभूमि खडा गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू नहुँदैमा माओवादी आन्दोलन नसकिने र झन् सक्रिय भएर अगाडि आउने बताए।
माओवादीको महाधिवेशनमा देशभरबाट आएका प्रतिनिधिका बीचमा राजनीतिक तथा वैचारिक रूपमा बृहङ्गम रूपमा छलफल भएको बताउँदै उनले केही व्यक्तिको अराजनीतिक टिप्पणी जस्तो हल्का रूपबाट महाधिवशेन सकिएको भन्ने विषयमा भ्रम नपाल्न आग्रह गरे।
देशभरीबाट आएका करिब एक हजार ८०० प्रतिनिधिलाई जुन ढङ्गले अपमान गर्न खोजियो, उनले भने, जुन महाधिवशेनले सबैभन्दा धेरै देश र जनताका बारेमा बहस र छलफल गर्‍यो।
जनवादी वहसबाट निष्कर्षमा पुर्‍यायो, त्यो कसैको आदेशमा चलेको भनेर प्रचार गर्नु यो भन्दा ठूलो बिडम्बना अरु केही हुन्छ? माओवादीलाई क्रान्तिकारी, सर्वाहारा, उत्पीडित जनताको पक्षमा काम गर्न लागि पर्ने बताए।
नेपालि जनताको पक्षमा काम अगाडि बढाउने विषयमा महाधिवशेनबाट ‘क्रमभङ्ग’ गरेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्र र जनताको पक्षमा अगाडि बढाउने विषयमा महाधिवशेनबाट ऐतिहािसक सङ्कल्प लिइएको बताए।